श्रीमती नेपालमा छोडी विदेश जानेहरु होसियार !! यस कारण बिग्रिन्छन नेपालमा श्रीमतीहरु !!! - ♣भिडियो जुलुम♣
Homeसमाचारश्रीमती नेपालमा छोडी विदेश जानेहरु होसियार !! यस कारण बिग्रिन्छन नेपालमा श्रीमतीहरु !!!
श्रीमती नेपालमा छोडी विदेश जानेहरु होसियार !! यस कारण बिग्रिन्छन नेपालमा श्रीमतीहरु !!!
काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बिग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् । श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको मस्ती….., विदेशमा श्रीमानलाई सास्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग मस्ती…. जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक जसो समाचारपत्रमा आइरहेका छन् । सुनौलो सपना बोकेर विदेशीएका श्रीमानले पठाएको पैसा नेपालमा बसेर अर्कैलाई ख्वाउने, प्याउने र अन्त्यमा श्रीमानको सबै कमाई कुम्ल्याएर अर्कैसंग भागेका कुराहरु हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं । यस्ता समाचार हरु प्रायः आफ्नै लापरबाही र धेरै बि श्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पीडितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ । आखिर के कारणले हो त ? बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बिग्रिनु ? उनीहरुका श्रीमतिहरु गलतबाटो रोज्न ? एउटा तितो एथार्थ हामीले विभिन्न पिडित व्यक्तिका अनुभवहरुलाई मार्फत संकलन गरी प्रस्तुत गरेका छौं । यसको मतलव यो होइन की विदेशमा गएका सबैका श्रीमति नेपालमा बिग्रिएका छन् । तर दिनहुँजसो आइरहेका समाचारहरु हेर्दा गलत बाटो अपनाउने श्रीमतिका श्रीमान कि त वैदेशिक रोजगारीमा हुन्छन् या त उनीभन्दा टाढा रहेको पाइन्छ ।
त्यस्तै आफ्नो श्रीमतिलाई सहीबाटोमा लगाउन बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसका लागि यी उपाय अपानाउँदा राम्रो हुन्छ । श्रीमतीलाई कत्ति पनि फ्री नछोड्नुहोस् । श्रीमतीका हरेक भनाइमा चनाखो रहनुहोस् । उनलाई व्यस्त राख्नुहोस् किनकी उनले नानाथरी कुरा दिमागमा आउने अवस्था नबनाउनुहोस् । उनि के गर्दै छिन् ,कहाँ जादै छिन् किन जादै छिन् , हरेक कुरो को जानकारी लिने गर्नुपर्छ ।
धेरै माया गर्छु भन्दैमा धेरै विश्वास गर्नु राम्रो हुँदैन । घरमा एक्लै नछाड्नुहोस्, आफू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने श्रीमतिलाई घरपरिवारसंगै राख्नुहोस् । सक्नुहुन्छ गाउँमै लगेर राख्नुहोस् । आमा बाबुसंग, शहर केन्द्रित ठाउँमा एक्लै नछाड्नुहोस् । यदी शहरमा राख्नै पर्ने बाध्यता भए उनीप्रति चनाखो बन्नुहोस् । उनको बारेमा जानकारी लिने माध्याम बनाएरै जानुहोस् । आमाबाबुको सबै कुरा सुन्नुपर्छ । बुहारी भित्र्याएपछि सासु बुहारीको झगडा परे पनि यो क्षणिक श्रीमान श्रीमतिको झगडा जस्तै हो । बुहारीसंग सासु नबोली पनि ती तपाईकी आमा हुन् । उनले तपाईको कहिल्यै कुभलो चिताउँदिनन् । त्यस्तैले श्रीमतीलाई भन्दाबढी आमा बाबुलाई बढी विश्वास गर्नुहोस् । श्रीमतीको विश्वासमा घरबार बिगार्नेहरुको नै आफ्नै घरबार धेरै बिग्रिएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।
यदी बालबच्चा छन् भने उनीहरुसंगबाट पनि धेरै कुराको जानकारी लिन सकिन्छ । वालबच्चा भनेका भगवान हुन् उनीहरुको बोली भगवानको बोली हो भन्ने परम्परा यसै चलेको होइन् । उनीहरुले झुटो बोल्न जानेका हुँदैनन् र बोल्दैनन् पनि उनीहरुलाई ललाई फकाई गरेका भए पनि आफ्नी श्रीमतिको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । घरमा को आयो, को गयो , घरमा बस्यो की बसेन । यस्तै यस्तै कुराहरु सोध्ने गर्नुपर्छ । जसले गर्दा श्रीमतिमा तपाईप्रतिको डर रहीरहन्छ । अर्को तपाईको फोनको श्रीमतिले कस्तो रेस्पोन्स गर्छिन् । त्यसप्रति पनि तपाई सचेत हुनुपर्छ । तपाईले फोन गर्र्दा कस्तो तरिकाले बोल्नु हुन्छ ?
ठाडो पाराले या सामान्य तरिकाले ? या बोल्दा बोल्दै रिसाएर फोन काट्नु हुन्छ ? जब श्रमती हरु बोल्दा बोल्दै एकासी झर्किने ,रिसाउने गर्छन भने शंका गर्नैपर्छ । असल श्रमती हुन् भने तपाई जे जस्तो भन्नुस बिदेस को फोन ,आफ्नो श्रीमानको फोन आउदा खुसि नै हुनु पर्छ । यदी सामान्य कुरो मै फोन काट्ने , झर्किने गरिन भने सम्झनुस कुनै चक्कर चल्दै छ, जहाँ अब तपाई को फोन नआउदा पनि कुनै फरक नपर्ने अवस्था भैसकेको छ । एन पी समाचार बाट साभार
पुरुषहरु अश्लिल फिल्ममा झै सेक्स पोज किन चाहन्छन् ? जानी राखौ
आफ़्नै साथीको गलफ्रेनसंग यस्तो हरकत गर्दै गरेको क्षण लुकाइएको क्यामरामा कैद गरिदै (भिडियो सहित)